ချစ်စံအိမ် March 27, 2012 at 3:52 AM
ရင်ဆူး March 27, 2012 at 4:43 AM
မေမြို့မိုး March 27, 2012 at 5:11 AM
း) ကိုသစ္စာကြီး ကျေနပ်မှာပါ ထွေးညိုရယ်
း) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို မြန်မာတိုင်းထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေ
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် March 27, 2012 at 10:03 AM
မောင် သစ္စာ ရယ်..မချစ်တဲ့ ထွေးညိုလေးဟာလေ..မြေ၇ှင်ယာ၇ှင် စနစ်ဆိုတွေရဲ့
အောက်မှာ ဘ၀ဆုံးတွားပြီကွာ...တရားနဲ့ သာဖြေပါနော်..ခိခိ...
jasmine(တောင်ကြီး) March 27, 2012 at 1:00 PM
ဒီပါးပါး မားမား ကမွေးရကြိုးနပ်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း
နွေလ March 27, 2012 at 1:15 PM
လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ အကြည့်လေးက စူးရှလိုက်တာ
သူကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါဦး အစ်မရေ
( အရေးအသားကောင်းတာလဲ ပါ၏ )
အလွမ်းမြို့လေး March 27, 2012 at 3:56 PM
သမီးစံတို့တော့ စာရေးတတ်ပါ့. ဖတ်လိုက်တာ မျှောသွားတယ် ... စာထဲနော်.
အခြေနေ ၃..၄ ခုကို ပိုစ်တစ်ပုဒ်တည်း တွဲရေးတတ်တာ တော်ပါ့.
မကြီးလွမ်းတို့တော့ သေတောင် ဒါမျိုးရမှာ မဟုတ်...
ညိမ်းနိုင် March 27, 2012 at 6:24 PM
အောင်အောင် March 27, 2012 at 8:32 PM
မဒမ်ကိုး March 28, 2012 at 2:06 PM
ထွေးညိုလေးရယ် ..သေးဆိုတာ မတ်တတ်ပေါက်ရတယ်း))
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 28, 2012 at 8:20 PM
ဒါနဲ့ ကိုသစ္စာက ဘယ်နားရောက်နေလို့ စာတစ်တန် ပေတစ်တန် ရေးရတာတုန်း..
အရင်ကတော့ ကလေးလေး ခုတော့လည်း ကိုသစ္စာ ကိုသစ္စာနဲ့
တော်တော်လေး တတ်နေပါရော့လား..း))
ဒီစာဖတ်ပြီး ကိုသစ္စာဖြစ်ချင်သူတွေ ပေါ်လာမယ်ထင်ပါရဲ့နော မထွေးညို :P
မိစံ ရော ဝင်မပြိုင်ဘူးလား
dd March 30, 2012 at 11:11 AM
dd March 30, 2012 at 11:15 AM
မောင်ဘုန်း March 30, 2012 at 10:28 PM
ခက်ပြီ ... အပျိုကြီးတော့ ... ကိုသစ္စာ နဲ့ထွေးညို ကို အကြာင်းပြပြီး
တိမ်ပြာပြာ ဆန်းဒေးတစ်ရက်မှာ ပြန်ဆုံကြပါစို့..... တဲ့ ....
အပျိုကြီး များ လွမ်း နေပုံ က မှတ်သား လောက်ပါတယ် ..... အဟီး ....
စီအိုင်အေ ပစ်ပစ် March 31, 2012 at 12:43 AM
ငဝန်နဒီ April 1, 2012 at 7:26 AM
နေညှိရင် လေပြိုစေတဲ့ တောတန်းလေးက ထွေးညိုကို သတိရအောင် ရေးတာတော့ဟုတ်ပါတယ် လွမ်းလောက် စရာနေရာ မှာနေနေတော့ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့ ကိုသစ္စာ အမြန်ပြန်လာနိူင်ပါစေ
ဆေးလိပ်ကတို နေညိုညို မှာ ထွေးညိုလေး နဲ့ ဆို ...ကိုသစ္စာ လွမ်းလောက်စရာပါ..
အိမ်မက်စေရာ April 2, 2012 at 1:54 AM
ထွေးညိုရေ.... နေမကောင်းလို့ ခုမှ ပဲ ရောက်ဖြစ်တယ် ခုလဲ သိပ်မကောင်းသေးပါဘူး ကိုသစ္စာ ကို ပြောပေးပါနော်..ထွေးညိုလို ပဲ နှာစေး ချောင်းဆိုးနေပါတယ်လို့..
san htun April 2, 2012 at 9:36 AM
8Yar April 5, 2012 at 12:18 PM
မစိုး April 10, 2012 at 1:54 PM